लाट्टे - मा कफी प्रेमीहरूको लागि नुस्खा
खाद्य र पेय पदार्थ, कफी
कफी प्रेमीहरूको सबै दुनिया भर पाउन सक्नुहुन्छ। केही जस्तै tart काले, अरूलाई नरम दूध रुचाउँछु। तर स्वादिष्ट कफी पेय स्वाद, बहुमत क्याफे जान्छ। लाट्टे, फ्रेपे र cappuccino घर पकाउने गर्न दुर्गम जस्तो देखिन्छ। तथापि, केही चाल बुझेर तपाईंले तिनीहरूलाई आफै, पनि एक कफी मिसिन बिना बनाउन सक्छ।
उदाहरणका लागि, यो घर मा बनाउन धेरै सजिलो छ Latte। यस नुस्खा यसको तयारी को इटाली आविष्कार भएको थियो। तर, इटालियनहरू अझ बलियो कफी रुचाउँछु। तर अमेरिका मा, अर्कोतर्फ, तिनीहरूले धेरै ठूलो चश्मा मा पिउन। को चिरपरिचित मा कफी शप "Starbucks" यो कप 600 एमएल सेवा छ। यसरी, Latte लागि2को4चमचा आवश्यक जमीन कफी, पानी 150 एमएल, दूध को 300 एमएल। फोम को उपस्थिति सम्म जगाएर गर्दा टूर्कू कफी र पानी, र गर्मी मिश्रण। त्यसपछि 60-65 डिग्री गर्न छुट्टै कन्टेनर मा दूध र गरम खन्याउन। एक विशेष अग्लो चश्मा मा आधा पोख्नुहोस् र एस्प्रेसो थप्नुहोस्। एक चम्चा एक ठोस फोम बाँकी दूध ब्लेंडर whisk र शीर्ष मा बाहिर फैलियो। अनुरोध मा, दालचिनी संग सजाउनु। यसरी क्लासिक इटालियन Latte तयार।
अन्य देशहरूमा नुस्खा पूरक र अनुसार कफी बारेमा आफ्नो विचार संग संशोधन गरिएको थियो। त्यसैले एक थियो Latte macchiato, Latte सिरप र पनि मादक Latte संग। जो एक घरमा खाना पकाउनु छ, यो त छैन कौशल मा धेरै, तर स्वाद प्राथमिकताहरू र सबै घटक को उपलब्धता निर्भर गर्दछ। र, को पाठ्यक्रम, धेरै महत्वपूर्ण अतिरिक्त आकर्षण Latte दिन्छ जो पेय-बिछ्यौना, राख्न। यस नुस्खा साँच्चै सजिलो छ। तर मुख्य कुरा हो - हतार छैन।
यसलाई प्राप्त गर्न, केवल पातलो धारा मा ग्लास को किनारा मा कफी खन्याउन। त्यसपछि उहाँले तल दूध संग मिश्रण बिना बिस्तारै settles। जब तपाईं सिरप थप्न यो त उहाँले ग्लास को तल मा समान रूप पतन हुनेछ, राम्रो शांत महत्त्वपूर्ण छ। र, पाठ्यक्रम, तपाईं अग्लो चश्मा प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ खुवाउन, तर राम्रो - विशेष आइरिस-चश्मा। त्यसपछि मात्र होइन स्वादिष्ट, तर पनि सुन्दर कफी पिउन Latte प्राप्त गर्न निश्चित हुन।
घरमा नुस्खा क्लासिकल एक फरक हुन सक्दैन। त्यसैले यसलाई उदाहरणका लागि सिरप संग एक Latte परीक्षण गर्न र खाना पकाउन, सम्भव छ। यो पनि तपाईँको लिङ्कमा एस्प्रेसो बनाउँने। ग्लास को तल आफ्नो मनपर्ने सिरप को चमचा को एक जोडी राख्न। कफी पीने एक किसिमको ऐसेलु र currant प्रयोग सिफारिस, धेरै मूल स्वाद प्राप्त। त्यसपछि ध्यान खुसीले गदगद दूध खन्याउन र कुटपिट, र त्यसपछि आफूलाई कफी। छैनन् आफ्नो क्षमता मा विश्वास गर्नेहरूलाई, एक चम्मच को मद्दतले त्यसो गर्न सक्नुहुन्छ।
र, को पाठ्यक्रम, घर हो - यो रक्सी पिउने Latte छ। यस मामला मा नुस्खा रोमान्टिक डिनर लागि सिद्ध छ। यो प्रयोग गर्न सबै भन्दा राम्रो छ liqueur "Baileys"। यसलाई पूर्ण कफी पिउन को स्वाद accentuate। पहिले तपाईं आफूलाई चश्मा न्यानो गर्न, तिनीहरूलाई तातो पानी मा केही मिनेट ड्रप गर्न आवश्यक छ। तिनीहरूलाई मा पोख्नुहोस् चमचा रक्सी र शीर्ष - दूध खुसीले गदगद (फोम मा यसको सचेतक ब्लेंडर पूर्व)। अब टूर्कू उच्च गर्मी मा 10 सेकेन्ड को लागि एक काठ छडी संग जगाएर, नुन को पिन्च, चीनी र प्रति सेवा कफी को एक चम्मच हीट। पानी 2/3 कप थप्न र (कफी जोश छैन) को फोम सम्म पकाउन। ग्लास को केन्द्र मा पोख्नुहोस्। दूध, कफी र दूध फोम: परिणाम तीन तहहरू हुनेछ।
जो एक Latte बनाउन लागि नुस्खा चुनिएको छ, यो कफी प्रेम को लागि एक वास्तविक पेय छ। सबै कफी प्रेमी पछि धैर्य मात्र समय र लागत बिना फेरि माथि माथि यो पकाउन सक्छ र।
कफी उठ्छ वा दबाब lowers
के कफी पिउन? कुकीहरू - छिटो र स्वादिष्ट मिठाई
आइस्ड कफी र यसको भिन्न
एक दानाको Caffitaly के हो?
कफी कसरी बनाउने
Stiv Kanningem - एक प्रतिभाशाली अमेरिकी घूंसेबाज
Gallstones हटाउन सञ्चालन। ऐच्छिक सर्जरी लागि तयारी
रोल waterproofing र यसको आवेदन
जब बिल्ली को बच्चा आफ्नो आँखा खोल्छ? के उहाँले खुला आँखा पहिले नै साथ जन्म भएको थियो भने?
जूता "Kapiköy": ग्राहक समीक्षा। ऊन "Kapiköy" संग छोराछोरीको जूता
म रूस र अन्य देशहरूको अब्खाजिया बासिन्दा एक पासपोर्ट चाहिन्छ?
को फिडर गर्न माछा मार्ने लाइन: माछा मार्ने बारे सबै
शताब्दी 21: कम्पनीको कर्मचारीहरूको समीक्षा
किन बच्चाहरूसँग छुट्छ?
जीव मा चयापचय के छ: परिभाषा
Sinyavino उचाइ। जनसंचार चिहानहरू कहिल्यै आपत्ति?
साइटको उचित डिजाइन - सफलताको कुञ्जी